Molokely : Ireo tsara ho fantatra mahakasika azy
Miray ara-nofo rehefa “ménopause” : Mahasalama!
Tsy tokony ho sakana tsy hiraisana ara-nofo mihitsy ny fiovam-batana eo amin’ny vehivavy, toy ny fitsaham-pitsaihana.
Tsy niray ara-nofo ela… ny atao
Mety ho noho ny halaviran-toerana, ny fiatoana maharitra satria voafitaka… no mahatonga ny vehivavy tsy hiray ara-nofo mihitsy, mandritra ny fotoana voafetra.
Kiraro “talons”, mampangitaka ny lehilahy
Araka ny fanadihadiana nataona profesora iray ao Grande-Bretagne, dia manintona lehilahy no sady mampiakatra ny filàny ny mahita vehivavy manao kiraro avo vodin-tongotra...
Lehilahy mivelatra soroka, mahay manome fahafinaretana!
Mitàna anjara toerana lehibe, ahafahan’ny vehivavy mahatakatra ny lanitra fahafito, ny endriky ny vatan’ny lehilahy, raha ny voalazan’ny fikarohana iray natao tany Etazonia tany.
Fangaro mampihenjana filahiana
Tsy resaka aretina fa matoa tsy mihenjana tsara ny filahiana eo am-piraisana ara-nofo dia tsy mientanentana tsara ka tsy tonga tsara any anatin’io taova io ny rà. Ireto no zava-pisotro manampy amin’izany.
Ny atao hoe vehivavy mahay miray ara-nofo …
Mora fantatra ny vehivavy mahay miray ara-nofo, hoy ny seksôlôgy iray avy ao Etazonia.
Inona no an-tsain’ny lehilahy rehefa miray ara-nofo ?
Araka ity fanadihadiana ity, ny antsasa-manilan’ny lehilahy no tsy mahafantatra akory izay ao an-tsainy mandritra ny fotoana mamy hifampizaràny amin’ny olon-tiany.
Taova tsy tena manaitra firy, ny lehilahy na ny vehivavy ny molokely amin’ny fivaviana. Isan’ireo faritra azo ambara ho itoeran’ny filangolangoan’ny vehivavy anefa io faritra io,
ka rariny loatra raha ampahafantarina ny momba azy.
1. Miendrika voninkazo
“Petites lèvres » no iantsoana ny molokely amin’ny teny frantsay, na ihany koa, “nymphe”. Anarana niantsoana ny andriamani-bavy rômana fahiny ny nymphe, izay misy ifandraisany amin’ny rano, loharano sy ny renirano. Mety ho avy amin’ilay voninkazo voahirana, izay antsoina hoe : “nymphéas” na “nénuphars”, amin’ny teny frantsay koa anefa, no nahatonga ny molokely antsoina hoe : “nymphe”. Raha fintinina dia toy ny voninkazo ny endrik’io taova io.
2. Tsy mitovy ny habeny
Tsy mitovy habe, halava ary hatevina ny molokelin’ny vehivavy iray. Mitovy lenta amin’ny hoditry ny vihy amin’ny lehilahy kosa ny hoditra mandrafitra azy.
3. Matroka noho ny hoditra
Tsy maintsy matroka kokoa noho ny hoditry ny fivaviana ny molokely. Raha miloko mavokely ny lavaky ny fivaviana, ny azy dia miloko volon-tany.
4. Mihoatra ny « grande lèvre »
Vehivavy 8 amin’ny 10 eo ho eo, izany hoe : ny ankabeazan’ny vehivavy, no manana molokely mihoatra ny molobe (grandes lèvres). Rehefa tafakatra ambony ny filàna no tena mipoitra izy io matetika.
5. Mitombo tampoka
Noho ny tsiry mpanentana miakatra, amin’ny taona mahamaoty, no mahatonga ny molokely hitombo habe tampoka. Toy ny fipoiran’ny nono ihany koa, tsy tsikaritra mihitsy ny fitombony, raha tsy efa elaela.
6. Azo safosafoina, mibontsina kely
Faritra mety hahazoana fahafinaretana ny molokely, raha hay ny mikitikitika sy manafosafo azy. Rehefa eo am-bavan’ny fahafinaretana fara-tampony ny vehivavy dia mibontsina kely io taova io. Mety haharitra ora iray mihitsy io fibontsinana io, eny fa na vita efa ela aza ny firaisana ara-nofo.